Tetikasa roa any atsinanana: ho tontolo voajanahary lovain-jafy… raha vita | NewsMada
Tetikasa roa any atsinanana: ho tontolo voajanahary lovain-jafy… raha vita
Nahazo fanampiana avy amin’ny « Breen Climate Fund » i Madagasikara. Kinendrin’ity tetikasa vaovao ity ny hanatsara ny fiainan’ireo tantsaha marefo monina any amin’ireo toerana hanaovana ny tetikasa. Hiatrehana ny fiovan’ny toetr’andro amin’ny fanomezana vahana ny fampiasam-bola, ny hampihena ny entona mangeja vokatry ny fandripahana ny ala ary ny hampiroborobo ny angovo azo havaozina.
Mpiara-miombon’antoka ny Vondron’olona ifotony (VOI) amin’ny fanatanterahana ny tetikasa, miteraka tombom-barotra ho azy ireo (fiompiana, fambolena, asa tanana, sns). Mitantana ny tetikasa ny Conservation International (CI) sy ny minisiteran’ny Tontolo iainana any amin’ny tandavanala Ambositra-Vondrozo sy tandavanala Ankeniheny-Zahamena, na “Tontolo voajanahary lovain-jafy ny ilany atsinanan’i Madagasikara”, raha vita. Dimy taona ny hanatanterahana izany, manaraka ireo lamina efa napetraky ny fanjakana malagasy sy ireo fifanarahana iraisam-pirenena. Vola 18, 5 tapitrisa dolara no hampiasaina.
Ny tetikasa faharoa, any amin’ny tapany atsinanan’ny Nosy, manomboka any Sava hatrany Anosy. Fiaraha-miasan’ny tsy miankina sy ny fanjakana. Ny BEI sy ny Athelia no mamatsy vola 35 tapitrisa dolara hanatontosana ny asa mandritra ny 10 taona. Ny 7 aogositra teo tany Ambatondrazaka ny atrikasa fanombohana ity tetikasa ity.